Ndị na-ede blọgụ: Ndị ọkachamara nke Ọdịnihu. N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ! | Site na Linux
Ndị na-ede blọgụ: Ndị ọkachamara nke Ọdịnihu
Na 1996, onye ọchụnta ego America bụ Bill Gates, onye nchoputa nke ọtụtụ mba Microsoft, buru amụma na "a ga-enweta ezigbo ego na ịntanetị". Na ihe karịrị afọ 20 mgbe e mesịrị, ọ dịghị onye ga-agọnahụ ma ọ bụghị. Ọ bụ ezie na a na-elekarị ụlọ ọrụ na-ewepụta ego kachasị ukwuu n'ụwa anya ndị metụtara agha, mmekọahụ na ọgwụ, ọ bụkwa eziokwu na ọkwa onwe onye ụdị ọrụ ọhụrụ apụtala na ntanetị, na-akwalite "Onwe ya" na-arụ ọrụ n'ime ndị mmadụ.
Ma ọ bụ ezie na ọtụtụ, ma na omenala ọrụ gburugburu ebe obibi (n'ọrụ na ọha na eze na / ma ọ bụ na nzuzo nzukọ) na na-esiwanye otutu na-egbu ejechi onwe ha gburugburu ebe obibi (Independent na / ma ọ bụ entrepreneur) ọ bụghị abụkarị a pụtara ìhè nhọrọ ọrụ nke ịde blọgụ, ya bụ, ọrụ okike nke ikwukọrịta, ịmara ma ọ bụ ịmụ nkuzi, nke ịmepụta uru bara uru site na ihe ọmụma, Eziokwu bụ na ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma, na-eweta ọgaranya na ọbụna bara uru (n'ọtụtụ ọnọdụ) na ịntanetị na ebe ndị nweere onwe ha.
2.1 Ntughari nke uzo oru
2.2 Ọrụ nke Ọdịnihu
2.3 Ndị na-ede blọgụ
Ugbu a anyị nwere ike ihota n'otu aka onye guzobere Facebook, Mark Zuckerberg, onye na-ekwusi ike na: "Internet na teknụzụ ọhụrụ na-emepụta ọrụ" ma kwuo na: "Maka mmadụ iri ọ bụla na-abanye n'Internetntanet, a na-emepụta ọrụ na otu onye si na ịda ogbenye".
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ihota Klaus Schwab, Onye isi ala nke World Economic Forum, na Davos 2016, onye kwuru na: "Mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ nke teknụzụ ọhụụ na-edu nwere ike iduga mbibi nke ihe dị ka nde ọrụ asaa n'ime afọ ise na-esote".
Agbanyeghi, na akuko ikpeazu nke Forum, agbakwunye amụma dị ka onye otu: "Enwere ike ịmepụta ihe ruru nde ọrụ abụọ, ọkachasị n'etiti ndị ọkachamara n'ihe gbasara sayensị kọmputa, ịka ụlọ, injinịa, ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ."
Ihe na-adọta ma na-adọta ụwa abụghị igwe kama ọ bụ echiche. Victor Hugo, onye edemede French, onye na-egwu egwuregwu na akwụkwọ akụkọ. (1802-1885) .ho nhwɛso.
Kedu, gbakwunyere ọtụtụ nkwupụta ndị ọzọ na eziokwu doro anya na ọkwa ọrụ, na-eme ka anyị mata, oke mmetụta nke teknụzụ, digitization na (r) evolushọn n'ozuzu na usoro ọrụ, nke na-adịbeghị anya, ma ọ bụ na ọ bụ ihe nzuzo, na nke enwere echiche dịgasị iche maka mmasị niile. Naanị ihe doro anya bụ na taa na ihe ga-abịa maka oge na-abịanụ ga-adị iche na ihe anyị ma na mara.
Ntughari nke uzo oru
Ọbụghị naanị na ndị mmadụ na - emepụta na / ma ọ bụ imeghari n'ụdị ọhụụ ma ọ bụ paradaịs ọrụ mgbe mgbe n'okpuru slogan nke "Freelancer". Kama nke ahụ, n'ozuzu "Ọrụ, òtù na ndị mmadụ" na-amalite ịgbanwee gaa n'ụdị ọhụrụ na ụdị nke usoro na mmekọrịta ọrụ. Wezọ anyi ghotara ma obu ghota oru g’abu ihe ozo nke ozo n’adighi-agbanwe agbanwe di ugbu a na odi n’iru.
Njirimara ọhụrụ nke "Ọkachamara nke Ọdịnihu" kwesịrị ịgụnye mmụta na-aga n'ihu, ikike ichegharị ma weghachite ọrụ mmadụ, mmegharị, ihe okike na mmegharị mgbe niile., tinyere ikike ka mma maka ịrụ ọrụ ọtụtụ ọrụ ọnụ, ya bụ, na ndị ọgbọ na ndị ọkachamara na-achịkwa ọzụzụ ndị ọzọ.
Ebe otu n'ime ihe ndị kachasị emetụta ma nwee mmetụta nke usoro ọhụụ ọhụrụ a ga-abụ mgbanwe ọrụ, agagharị, ojiji nke teknụzụ dị elu, ọrụ telivishọn, mmekọrịta na ọgụgụ isi Artificial ma ọ bụ ndị nnọchi anya nke ibu ọrụ na ime mkpebi na ha, na iji Big Data, Machine Learning na Blockchain maka nchekwa na ntụkwasị obi nke njikwa oke ozi.
Ya mere, ihe kachasị mma nke ọnọdụ maka «New Work Paradigm» maka oge na-abịanụ na-ahapụ anyị na otu ebe «anyị ga-ebi Talent Talent» na ụdị kachasị mma nke egwuregwu ma ọ bụ na-eme ụwa. Na otu ebe anyị na-agaghị asọmpi ibe anyị, mana anyị ga-asọ mpi na ụdị teknụzụ ọhụụ (mmemme, igwe, robot, androids). Agbanyeghi na ọ nwerekarịrị nkasi obi nke ụlọ anyị ma ọ bụ na mpụga nzukọ anyị na-arụ ọrụ.
Nnukwu mgbanwe a ga-enwerịrị ihe mmadụ bu isi iji nwee ihe ịga nke ọma karịa mgbe ọ bụla. Ya mere na ọ ga-abụrịrị isi iyi bara uru nke na-agbakwunye uru na nkwado na nzukọ a, mana n'aka nke ya, ọ ga-abụ nke a na-achọ n'aka ndị ọrụ mmadụ. Ebe ọ bụ na ị ga-ekwe nkwa Ọdịnihu mmadụ ọzọ maka mmadụ, anyị ga-esi na Paradigm of Automation (Ngwa igwe / arụmọrụ / arụmọrụ) gaa ebe mmadụ na-aga n'ihu ịbụ onye mbụ, ọ bụghịkwa onye ikpeazụ, na ọnụọgụ uru nke Nhazi.
Ọrụ nke Ọdịnihu
Afọ ole na ole sochirinụ ga-abụrịrị na ị ga-achọ ịchọta ma ọ bụ na-ezighi ezi ego ọtụtụ mmadụ site na ọrụ / ọrụ ndị metụtara ọtụtụ ihe okike na mmekọrịta mmekọrịta. N'ihi na akụkụ ndị a na-abụkarị teknụzụ ọgbara ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ ọgụgụ isi, ka na-enweghị ike i emomi nke ọma.
N'ihi nke a ndị ọkachamara na-erigbu ma ọ bụ na-achịkwa ojiji nke netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta, iji mepụta ma ọ bụ kesaa ọdịnaya / ahụmịhe / ihe ọmụma ga-abụ nnukwu agụụ ma ọ bụ nwee nnukwu ohere n'okpuru usoro Freelance (Free = Free na Lance = Lanza, «Lanza Libre»), ya bụ, dị ka Freelancer (Independent).
Howghọta otú Enweghi onwe ya n'ọrụ (ọrụ) nke mmadụ ji aka ya ma ọ bụ kwụ ọtọ, na-emepe ọrụ ha ma ọ bụ azụmaahịa ha, ma ọ bụ na mpaghara ndị ahụ ọ nwere ike ịba uru karịa, ma na-eche ndị ọzọ chọrọ ọrụ a kapịrị ọnụ.N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ọrụ ndị ọrụ na-eweghị n'ọrụ na / n'ime otu nzukọ, iji nweta otu ma ọ bụ nsonaazụ kachasị mma site n'aka ndị ọrụ na-adịgide adịgide.
Ma ebe ọ bụ na Onwe ya bụ ụdị ọrụ na-enye nnukwu uru maka onye ọ bụla kpebiri ịme nzọụkwụ ma họrọ maka ọrụ onwe ya, enwere ike kwubie na onye ọrụ Freelancer bụ onye ọrụ nọọrọ onwe ya na-eji ikike ya, ahụmịhe ma ọ bụ ọrụ ya iji mezuo ọrụ ndị ahịa chọrọ nka ya.
Isslọrụ ndị na-agụnyekarị ọrụ ma ọ bụ akụkụ ha, nke na-achịkwa site na ntuziaka ndị ahịa kọwara. Ntuziaka nke onye ahịa ahụ nwere ike ịkọwapụta tupu oge eruo, ọ bụrụ na ọ maara nke ọma ihe ọ chọrọ, ma ọ bụ ndị ahịa na onye nweere onwe ya iji mee mkpebi kacha mma maka imepụta ọrụ ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Isslọrụ ndị na-akwụkarị ụgwọ ọrụ akụ na ụba n'etiti onye ahịa na onye nweere onwe ya tupu ịmalite ọrụ ma ọ bụ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ndị a abụchaghị ego anaghị akwụ ụgwọ, kama ọ bụ ego maka oge etinyere ma ọ bụ maka oke ọrụ metụtara ọrụ ahụ dum.
N'ime ndị ọkachamara ndị a na-erigbu ma ọ bụ na-achịkwa ojiji nke netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta nke ọma na ndị na-ahọrọkarị ọrụ "enweghị onwe", anyị na-ahụkarị ndị na-ede blọgụ na ndị mmepe ndị ọzọ na / ma ọ bụ ndị njikwa nke ọdịnaya dijitalụ, ndị na-emepụta ma na-ebunye ihe ọmụma, ma na-atụle isiokwu ndị dị mkpa maka ụfọdụ ndị na-ege ntị.
Ọrụ a (Blogger) na ndị ọzọ metụtara ya ga-emekwu nghọta, na-echekarị maka "Ọgbọ Y" na Millennials dị ugbu a., ndị na-enweghịzi àgwà nke ilele ozi dị na nkwukọrịta mgbasa ozi dị ugbu a (Akwụkwọ, Magazines, Ederede Press, Redio na TV) dịka ndị nna nna anyị mere ma ọ bụ mee.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ n'akụkụ ndị nke Blogger nwere ọdịnihu dị mma, n'ime na n'èzí enweghị ngalaba, yana mpaghara mmetụta nke netwọkụ mmekọrịta., na nke anyị ga-ekwu banyere 20 kachasị nkwa na ọdịnihu dị nso:
Digital Content Onye Okike: Onye ọkachamara nke na-ebi site na ịmepụta na ijikwa ọdịnaya dijitalụ na multimedia maka (ntanetị (Bloggers, Vloggers, Influencers, Copywriters, Writers and Digital Journalists).
Onye Mmepụta software: Mmemme, Onye Okike na Nlekọta nke Sistemụ na Ngwa ugbu a. Nnukwu ohere kachasị maka ndị na-arụ ọrụ maka mkpanaka gburugburu, eziokwu dị adị na teknụzụ blockchain.
UI / UX ndị nrụpụta: Ndị ọkachamara mmemme mmemme ọkachamara na mmepe, mmejuputa na mmelite nke UI (Ntuziaka Ndị Ọrụ) na UX (Njikere Ahụmịhe Ndị Ọrụ).
Onye ọrụ / ọkachamara ọkachamara ọkachamara: Ndụmọdụ na Nkwado onye nyocha maka mmeta nke onye ọrụ / afọ ojuju yana ọganiihu.
Onye na-enye ndụmọdụ gbasara ọha na eze: Ndị ọkachamara na-ebi ndụ site na ilekọta na imeziwanye ihu ọha ọha nke ndị mmadụ ma ọ bụ nzukọ, ọhaneze ma ọ bụ nkeonwe.
Ihe Onyonyo Foto Dijital: Ndị ọkachamara na-ebi ndụ site na ilekọta na melite onyonyo dijitalụ nke Ndị mmadụ ma ọ bụ Nhazi, ọha ma ọ bụ nkeonwe.
Onye nkuzi n'ịntanetị: Onye nkuzi na agụmakwụkwọ / nkuzi n'ịntanetị, chọrọ taa.
Onye nchịkwa ọkachamara: Ndị ọkachamara na-enyere ndị ọzọ aka ịgbanwe n'akụkụ dị iche iche nke ndụ ha, ọkachasị ebe ọrụ.
Onye na-enye ọzụzụ: Ndị ọkachamara na-enyere ndị ọzọ aka ịchekwa ma melite ọdịdị ha, ahụ na ọnụ ọgụgụ ha.
Digital Marketing Professional: Ọkachamara na-ejikwa azum ahia nke emere na igwe dijitalụ ndị mmadụ ma ọ bụ òtù dị iche iche.
Nnukwu onye nyocha data: Ọkachamara nke na-enyocha ozi niile sitere na usoro na-agagharị na ịntanetị na nke ahụ nwere ike imetụta azụmaahịa / ụlọ ọrụ.
Onye nchịkwa obodo: Ọkachamara maka ijikwa ndị ahịa na / ma ọ bụ obodo nke Companylọ Ọrụ Ntanetị iji nakọta echiche iji melite azụmaahịa na ọnọdụ nke otu ndị a. Ọrụ ya gụnyere njikarịcha njin ọchụchọ (SEO) ka ndị ahịa wee nwee ike ịchọta anyị, nyocha engine search engine (SEM), akpaaka nke usoro azụmaahịa (SEA) yana njikarịcha mgbasa ozi mmekọrịta (SMO).
Ozi Specialist Security: Onye ọkachamara na-ahụ maka mmesi obi ike (nchebe na nzuzo) nke ozi dijitalụ niile nke otu onye, ​​ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Architect na 3D Injinia: Ọkachamara metụtara mpaghara Injinia, Architecture na Urbanism, zụrụ azụ maka atụmatụ 3D gburugburu ma ọ bụ ibipụta ihe 3D.
Ngwaọrụ Onye Mmepụta: Ndị ọkachamara zụrụ azụ na mmepe nke ngwaọrụ "teara" nke teknụzụ (enwere ike eyi), dịka: iko, anya m, nche, akwa, na ndị ọzọ.
Innovation Manager: Ọkachamara nwere ike ịtụgharị uche na usoro ma ọ bụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ na mpụga nke ụlọ ọrụ, iji meziwanye usoro azụmaahịa ya.
Onye njikwa onyinye: Ọkachamara na mpaghara onyinye mmadụ nke nwere ike ịchọpụta na ịme ihe nke ọma na ike na adịghị ike ndị mmadụ, iji zụọ ha ka ha bụrụ ndị ọkachamara na ọrụ ha.
Ọkachamara Ahịa Ahịa: Ndị ọkachamara na-elekọta ịdọrọ na idebe ndị ahịa n'ịntanetị.
Isi nke E-CRM: Onye ọkachamara na-elekọta E-CRM System (Onye Mmekọrịta Mmekọrịta Ndị Ahịa na Igwe ojii - Njikọ Mmekọrịta Ndị Kọmputa). Pụrụ iche na ijikwa usoro iguzosi ike n'ihe dị iche iche nke ndị ahịa Organizationtù.
Onye ọrụ Robot: Ndị ọkachamara na-ahụ maka ị na-arụ ụdị ọrụ ndị a na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke mmadụ na-akabeghị onwe ya, ya bụ, e mere ha iji soro ndị ahịa nke otu nzukọ na-emekọrịta ihe mana ndị ọrụ ga-enyere ha aka.
Dabere na Sebastián Síseles, Onye isi oche International nke saịtị Freelancer.com: "Taa karịa mgbe ọ bụla, ndị edemede na ndị nkwukọrịta na-ebute ọchịchọ maka ọrụ ịntanetị". Onye isi ọrụ kwuru ihe ndị a:
Akwụkwọ akụkọ dị na akwụkwọ, ha ga-aga n'ihu, mana a na-ezitekwa ha ọtụtụ site na dijitalụ. Nke a pụtara na ndị edemede na ndị nkwukọrịta ka dị mkpa iji mepụta ọdịnaya ahụ. Maka nke a, onye dere ọdịnaya bụ ọrụ toro ọtụtụ ma ejiri m n'aka na ọ ga-aga n'ihu na-eto eto n'afọ ndị na-abịanụ nke ọrụ ịntanetị.
Na otu saịtị ahụ, maka afọ 2018:
Agụmagụ ọmụmụ ihe enwetakwala nnukwu mmụba, ogo na ngalaba 10 kachasị elu. Na mgbakwunye, n'ime okike nke ọdịnaya ịntanetị, ide ihe maka blọọgụ dị nnukwu mkpa, yana uto nke 146.6% na SEO ederede maka ụlọ ọrụ ...
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị bụ ezigbo aka na ihe ị na-eme, na ịchọrọ iji ike gị wee mee ka ụwa mara ha, ihe ezi uche dị na ya bụ ka ị bụrụ BloggerMa obu na blọgụ nke gi ma obu nke onye ozo, ma onye ma nno na inwere ike inweta ego ma o buru na itinye ego na blog gi ma obu site na ikwu okwu maka mmepe nke ihe dijitalụ gi di na blog. Nweta ihe ịga nke ọma gị na nnwere onwe ego site n'ụzọ ọhụrụ a nke ịrụ ọrụ n'ịntanetị.
Taa, ọtụtụ ndị ọkachamara na-eto eto na-achọ mmezu ọkachamara na ego ha, site na ụdị ọhụụ ọhụụ nke ọrụ onwe ha ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na n'ozuzu ha, ọtụtụ n'ime ndị a na-abanye n'ahịa ka ha wee nweta nnabata ma nwee obi iru ala, gburugburu ọrụ ndị kwekọrọ na ebumnuche ha n'ọdịnihu, enwere ndị ọzọ bụ ndị ebum n'uche ha bụ ịrụ ọrụ na ihe ga-eme ha obi ụtọ, na-enweghị ịkwụsị otutu na ego na uru.
Ma na nke a, ọrụ nke onye na - ede blọgụ nwere ike daba n ’ụzọ abụọ ọ bụla. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịnọrọ onwe gị na Blog nke gị iji nweta ego ya, ma ọ bụ nke otu nzukọ na Blog, na-enweghị ike ịbụ "ekpochi n'otu ebe maka awa 8 ma ọ bụ 10."
Echiche ọhụrụ a nke ịbụ onye nwe ego gị (azụmaahịa) yana ịzụlite uto ya ma dabere na onwe gị, n'ike nke aka gị, etinyekwu ike kwa ụbọchị. n'etiti ndị ọkachamara ugbu a na-ahụ onwe ha dị ka ndị ọchụnta ego ma jiri usoro teknụzụ ha nwere iji mezuo nrọ ha.
Enwere m olileanya na mbipụta a bụ ihe masịrị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, ma na-akpali ndị na-ede blọgụ dị ugbu a ịga n'ihu ọmarịcha ọrụ a nke ịmepụta, mmụta, nkuzi na ịkekọrịta ihe ọmụma na ahụmịhe. site na ọdịnaya dijitalụ site na ntanetị dị iche iche na mgbasa ozi, ọtụtụ oge na-arụ ọrụ, na mgbe ụfọdụ n'ụzọ nkwụghachi ụgwọ. Na-agba ndị ọzọ ume ka ha malite na ụwa a magburu onwe ya nke ịde blọgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Ndị na-ede blọgụ: Ndị ọkachamara nke Ọdịnihu. N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ!
O doro anya na ọ dị ezigbo mma mana ihe m hụrụ bụ na ọ bụ maka ịtụgharị ọrụ n'ime ọrụ. Nke a mere ka anyị laghachi n’oge ndị ohu na-ejere nna ukwu ukwu ọrụ nke na-achịkwa ọ bụghị naanị ọrụ ha kamakwa ndụ ha.
Imirikiti ọrụ ndị a kọwara na-elekwasị anya na ahịa.
Anyị nọ n'oge mgbe ahịa esiwo n'aka ya pụta na njedebe n'onwe ya.
Ma mgbe asọmpi ahụ zuru ụwa ọnụ na esemokwu akụ na ụba jọgburu onwe ya, ọ baghị uru iji dị mma ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ya dị ọnụ ala.
N'ọnọdụ dị otú a, owu ọmụma bụ ihe kachasị njọ iji melite ọnọdụ mmadụ na mkpokọta.
Onyekwere S dijo
Sp kpalitere ọchịchị Kọmunist niile na ihuenyo m, loko. Kedu otu o siri sie ike ịghọta na ahịa ahụ bụ maka ijere ndị ọzọ ozi n'ụzọ kachasị mma ma kwụọ ụgwọ maka ọrụ ahụ? You na-atụ egwu ịsọ mpi?
Zaghachi Sergio S
Ekele Sergio. Aghọtaghị m otu ị si jikọta echiche a nke "Ọchịchị Kọmunist" na ịgụ ihe, mana m na-asọpụrụ echiche gị. Enwere m ike ịgbakwunye na ihu ọma gị na ọ bụrụ na ị na-achọ akwụkwọ maka nkà ihe ọmụma nke "The Hacker Movement and the Free Software Movement" na ọtụtụ oge jikọtara ya na Blogger Movement (Mụta / Na-akụzi / Ekekọrịta) site na forntanetị n'efu nke oge, nke ọma, ee, ma ọ bụ maka ma ọ bụ megide, mmegharị ndị a metụtara ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ahụ. Ma ọ bụghị ya, aghọtaghị m ihe ọ bụla ọzọ ị dere na nkọwa gị ka m wee nwee ike ịza maka ndị ọzọ. Ka o sina dị, daalụ maka ntinye gị.
Ebube a na-akwanyere ùgwù, ọ bụ ezie na isi ihe bụ iji gosipụta ọrụ nke ndị na-ede blọgụ (Akwụ ụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị, Independent ma ọ bụ na ọ bụghị) yana ohere anyị n'ọdịnihu iji nọgide na-enye onyinye yana na ọrụ anyị na-aga n'ihu na-eji obodo akpọrọ ihe.